China Plano Convex Lens, Kaviri Convex Lens, Convex Lens Mutengesi
Tsanangudzo:Plano Convex Lens,Kaviri Convex Lens,Convex Lens,Convex Lenses,,
 HomeProductsIdenderedzwa LensPlano Convex Lens
Zvigadzirwa zve Plano Convex Lens , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Plano Convex Lens , Kaviri Convex Lens vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Convex Lens R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Plano convex lens inoshandiswa muma microscopes uye kukudza magirazi kuti ishandure ese anouya mwenje mwenje kune imwe nongedzo. Iyo lens inoshandiswa se lens system mumakamera sezvavanotarisa mwenje mwenje kune yakajeka mufananidzo.Lens ine...
Plano convex lens inoshandiswa muma microscopes uye kukudza magirazi kuti ishandure ese anouya mwenje mwenje kune imwe nongedzo. Iyo lens inoshandiswa se lens system mumakamera sezvavanotarisa mwenje wechiedza wemufananidzo wakajeka.Lens ine...
UV-giredhi yakasanganiswa silica inopa kutapurirana kwakakwira muiyo yakadzika UV, ichiita sarudzo yakanaka yekushandisa kubva kuUV kuenda kune iri pedyo IR. Uye zvakare, UV yakasanganisa silika ine homogeneity zvirinani uye yakaderera coefficient...
Germanium Plano-Convex Lenses ndeyechokwadi kune akasiyana maficha infrared, kusanganisira yekupisa imaging, infrared spectroscopy, uye kure sensing. Magadzirirwo: Chinyorwa: Germanium (Ge) Dhizaini Wavelength: 10.6um Focal Legnth Kushivirira: +/-...
Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex Lenses yakagadzirirwa kutarisisa kana kuenzanisira kunyorera mukati mekati uye wavewa infrared spectrum. Magadzirirwo: Chinyorwa: ZnSe (Zinc Dlenide) Dhizaini Wavelength: 10.6um Focal Legnth Kushivirira: +/- 1%...
China Plano Convex Lens Vatengi
Iyo plano convex lens ndiyo yakajairika mhando ye lens element. Inogona kushandiswa kutarisisa, kuunganidza, uye kubatanidza mwenje. Iyo plano convex lens inobatsira seyakareruka imaging lens yemasisitimu uko hunhu hwemhando yemufananidzo haunyanyo kutsoropodza. Isu tinopawo chaiyo giredhi plano-convex lenses ine akasimba ekugadzira mamirire. Zvemhando yepamusoro mufananidzo, isu tinopa akawanda-element edhijitari ekufungidzira malensi uye emakomputa-akagadziridzwa achromatic maviri malenzi
Plano Convex Lens Kaviri Convex Lens Convex Lens Convex Lenses Plano Convex Lense